7 နညျးလမျးမြားရန် Stay ကျန်းမာရေး Travel နေစဉ် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >7နညျးလမျးမြားရန် Stay ကျန်းမာရေး Travel နေစဉ်
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 02/06/2020)
လက်ရှိနှင့်အတူ coronavirus ၏ဖြစ်ပွား ဖရိုဖရဲသို့လူတိုင်းရဲ့ခရီးသွားအစီအစဉ်များကိုပစ်, သငျသညျသင့်လျှင်သိရန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ် coronavirus စဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့အားလပ်ရက်ကိုစောင့်ရှောက် ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ. သင်ကသေချာသင်ကသင်၏ကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်ရန်ခြေလှမ်းများယူပြီးနေစေရန်အရေးကြီးပါတယ်အပေါ်ဆက်လက်ရန်ရွေးချယ်ကြပါလျှင်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမနိုင်ပေမယ့်. ကြောင်းအဆုံး, ဒီမှာပါ7သငျသညျခရီးသွားလာစဉ်ကျန်းမာနေဖို့အကူအညီတောင်းဖို့ခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ.
ရထားပို့ဆောင်ရေးအဆိုပါ Eco-Friendly Way ကိုရန်ခရီးသွား Is. thဆောင်းပါးရထားခရီးသွားနေဖြင့်တွေအကြောင်းပညာပေးတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားဖြစ်ပါတယ် တစ်ဦးကရထား Save, ကမ်ဘာပျေါမှာစျေးအချိုဆုံးရထားလက်မှတ်တွေဝက်ဘ်ဆိုက်.
Stay ကျန်းမာရေးနံပါတ်ခရီးသွားနေစဉ် 1: သင်၏လက်ကိုဆေးကြော
ဒီတစ်ခုသိသာထင်ရစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့လက်များကိုဆေးကြောကျန်းမာကိုယ့်ကိုကိုယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အဘယ်ကြောင့်? ယင်းအလိုအရ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု, “သင်၏လက်ကိုဆေးကြောစနစ်တကျအမှိုက်ဖယ်ရှားပေး, ဗိုင်းရပ်စ်, နှင့်ဘက်တီးရီးယားအခြားလူများနှင့်တ္ထုမှပြန့်ပွားသူတို့ကိုရပ်တန့်ဖို့, ထိုကဲ့သို့သောအစာအဆိပ်သင့်အဖြစ်ရောဂါပျံ့နှံ့နိုင်သည့်, တုပ်ကွေးသို့မဟုတ်ဝမ်းလျှော. ဒါဟာရောဂါကူးစက်မှုကိုတက်ကောက်နေနှင့်အခြားသူများသူတို့ကိုပြန့်ပွားခြင်းမှရပ်တန့်ကလူကိုကူညီနိုငျ”.
ရိုးရှင်းစွာအထား, လက်အဝတ်လျှော်သောနေ့ရက်ကာလကိုတစ်လျှောက်လုံးသင်စုဆောင်းမိအပေါငျးတို့သ gook တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရရှိ. ဤသည်အထူးသဖြင့်အဘို့အ pertinent ဖြစ်ပါတယ် ခရီးသွားများအတွက်. ခရီးသွားက်ဘ်ဆိုက်များကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလူများအလုံးအရင်းနှင့်ပြည့်. တစ်နေ့လျှင်တစ်တထောင်ကလူတစ်ခုတည်းများရှိတံခါးလက်ကိုင်ကိုထိနေတယ်ဆိုရင်, ရုံတစျခုသညျမိမိလက်ကိုဆေးကြောမထားပါဘူး, ဒါကြောင့်သူဖြစ်ရမည်ဘယ်လောက်ညစ်ပတ်ထင်!
သငျသညျလုံလောက်သောပြေးရေသို့မဟုတ်ဆပ်ပြာမပါဘဲတစ်ဦးဧရိယာထဲမှာဆိုရင်, သငျသညျအစသေချာသင်မှန်မှန်လက်သန့်ရှင်းရေးဝယ်ယူအသုံးပြုခဲ့ကြပါစေရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. အရမ်းမကြာခဏအသုံးပြုသောလျှင်ထိုသင်၏လက်ကိုထုတ်ခန်းခြောက်နိုင်ပါတယ်နေစဉ်, သငျသညျသန့်ရှင်းသောလက်နှင့်ပျော့ပျောင်းသောအသားအရေရှိနိုင်ပါသည်ဒါကြောင့် moisturizing အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်ကိုလက်သန့်ရှင်းရေးဗားရှင်းလည်းရှိပါတယ်.
ဒါဟာတာရှည်အဆိုးအလုံအလောက်အိပ်ပျော်နေသောမကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ထိခိုက်စေသောလူသိများခဲ့ရဲ့. အားလပ်ရက်ပေါ်မှာအရုဏ်၏အက်ကွဲမှာတက်ရနှင့်ညဉ့်၏အလယ်တွင်သည်အထိန်းကျင်ကို run ဖို့ကောင်းတစ်ဦးအယူအဆနဲ့တူပုံရပေမည်နေစဉ်. သို့သျောလညျး, အမှန်တရားအတွက်လုံလောက်သောအိပ်စက်မှုရတဲ့သင်ထင်ချင်ပါတယ်ထက်အများကြီးပို Impact ဖြစ်ပါတယ်. ညမှာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နုပျိုပင်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေရန်အချိန်ကြာ. သငျသညျငိုက်အတွက်သုံးဖြုန်းအဆိုပါလျော့နည်းအချိန်သင်ကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နည်းအချိန်ကိုဆိုလိုတယ်.
တကယ်တော့, လေ့လာမှုများပင်အိပ်ပျော်ခြင်းအလုံအလောက်မကျင့်သောသူတို့ကိုလည်းထိုကဲ့သို့မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားများနှင့်မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုအဖြစ်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်တံ့အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုခံရနိုင်သည်ကိုပြသကြ. ခရီးသွားလာစဉ်ကဤဆိုးကျိုးများသာပိုဆိုးနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်တစ်ဦးမျက်နှာသာမသေချာသင်ခုနစျပါးနာရီညဥ့်တစ်နိမ့်ဆုံးအဘို့မြက်ပင်ထိမှန်စေ.
သငျသညျအများအပြားပြောင်းရွှေ့င့်လျှင်သင်တို့၏ zzz ရဲ့ရရန်ခက်ခဲဖြစ်နိုင်သည်နေစဉ် အချိန်ဇုန်များ နှင့်ဂျက်နောက်ကျခံစားနေရပြီးနေကြသည်, သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ဖြေလျှော့ကူညီရန်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများသုံးပါနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်းမှပယ်လွင့်မျောနေသောနိုင်ပါတယ်. ဤရွေ့ကားနွေးထွေးသောရေချိုးခန်းသို့မဟုတ်ရေချိုးပါဝင်သည်, လာဗင်ဒါ-ဆှတျဖနျြးမှုန်ရေမွှား, သေချာစွာစဉ်းစားခြင်း, လက်ဖက်ရည်နှင့်ပင်နွေးခွက်ကို. တိုတိုပြောရရင်, အိပ်စက်ခြင်း၏ပဒေသာရတဲ့ခရီးသွားနေချိန်မှာသင်ကျန်းမာနေဖို့ကူညီပေးဖို့အလွန်အရေးကြီးသည်.
Stay ကျန်းမာရေးနှင့်နယ်လှည့်နေစဉ် ပုတ်ရေရှောင်ကြဉ်ပါ
သငျသညျတစ်နေရာရာမှာအတော်လေးအမည်မသိဦးတည်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျကိုထိပုတ်ပါရေကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ကြောင်းသိသာဒါဟာလဲဖြစ်သင့်. အဘယ်ကြောင့်? ဒေသခံရေအတွင်းရှိပိုးမွှားဒေသ-သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်သောကြောင့်, နှင့် / သို့မဟုတ်အူဘက်တီးရီးယားသူတို့ကိုကိုင်တွယ်ရန်ကိုပြင်ဆင်အားလုံးမှာမဟုတ်. တစ်နှစ်လျှင်လူပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏နေမကောင်းအရက်သောက်ဒေသခံရေမရ, ထိုကဲ့သို့သောအန်ခြင်းနှင့်ဝမ်းလျှောအဖြစ်သက်ရောက်မှုအလွန်ဘုံနှင့်အတူ. တစ်ဦးအစွန်အဖျားအဖြစ်, ရေပုလင်းမှချောင်းကိုသင်သည်သင်၏နှစျသိမျ့ဇုန်ထဲကဝေးနေအခါတိုင်း. ဤသည်အသေအချာမသိတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးအလေ့အကျင့်တွေနဲ့တည်နေရာနှစ်ချက်ဝင်. အခွားသောလျော့နည်းဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင်အိမ်သာဝန်ဆောင်မှုနေရာများတွင်ကဲ့သို့တူညီသောအရင်းအမြစ်မှသောက်ရေသုံးနိုငျ. ဟုတ်ကဲ့, တစ်အချက်ကတော့င်!
လည်း, သငျသညျစနစ်တကျ hydrate သေချာအောင်. ပူပြင်းတဲ့အပူချိန် နှင့်စိတ်အားသန်သောလှုပ်ရှားမှုအလုံအလောက်သောက်ရေမရှိဘဲဆေးရုံတစ်ဦးအမြန်လက်မှတ်များမှာ.
သင့်ရဲ့ Shots Get
သင်သွားဘယ်မှာပေါ် မူတည်., သင်တစ်ဦးခရီးသွားဆေးခန်းသို့မဟုတ်အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစင်တာမှာရိုက်ချက်များအထူးပြုရရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်. ဒါကတချို့လျော့နည်းဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများအဘို့အထူးသဖြင့်မှန်, ထိုကဲ့သို့သောငှက်ဖျားနှင့်အဝါရောင်အဖျားအဖြစ်ပေးသောနေဆဲအားကစားရောဂါ. သင်သည်သင်၏ခရီးစဉ်အပေါ်ထွက်ဦးမဖြစ်မီ, ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အစင်တာများစစ်ဆေး (CDC) က်ဘ်ဆိုက်. ဤတွင်သင်ခရီးသွားလာနေသောအရာမှတိုင်းပြည်များအတွက်တိကျသောလိုအပ်ချက်အထဲကရှာတွေ့နိုင်ပါသည်. သငျသညျအမရေိကနျပွညျထောငျစုမှမဟုတ်ဆိုရင်, သင်သည်လည်းသင်၏ဒေသခံဆက်ဘ်ဆိုက်စစျဆေးနိုငျ, ထိုကဲ့သို့သော NHS အဖြစ်, ကျန်းမာခရီးသွားအဘို့သင့်လိုအပ်ချက်များအတွက်.
Stay ကျန်းမာရေး: သင့်မျက်နှာထိမနေပါနဲ့
ကျနော်တို့ပြီးသားလက်အဝတ်လျှော်အကြောင်းကိုစကားပြောင့်အဖြစ်, ယခုသင်၏မျက်နှာကိုအကြောင်းပြောဆိုရန်အချိန်င်. မကြာခဏသငျသညျကလူသူတို့လက်၌မိမိတို့၏ဦးခေါင်းကိုအနားယူမြင်ရပါလိမ့်မယ်, တစ်ဦးအနာအမွေးကိုကုပ်ခြစ်, သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်သူတို့မျက်နှာထိ. ဒါဟာသင်ကျန်းမာနေစဉ်အတွင်းနယ်လှည့်နေဖို့ဖို့ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်ကိုချိုးဖျက်ဒါပေမယ့်ကွာသင်၏မျက်နှာကိုမှသင်၏လက်၌စောင့်ရှောက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အလေ့အထင်.
ဒါဟာဘုံအသိ, သင်၏လက်နေ့ကိုတလျှောက်လုံးဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာတို့ထိအဖြစ်. တစ်ဦးတွင် ရထားသို့မဟုတ်လေယာဉ်, သင်ဗန်းစားပွဲရှိသည်လိမ့်မယ်, အဆိုပါနဲ့ခါးပတ်. သောသင်နေထိထိမိမိနှင့်အထူးထူးအပြားပြားနဲ့အခြားဘုံအာကာသဒေသများ. သငျသညျနေသငျသညျအရာတစ်ခုခုကိုမထိအခါတိုင်းသင်၏လက်ကိုဆေးမဟုတ်လျှင် (သို့မဟုတ်လက်အိတ်ဝတ်ထားခံရဖို့ဖြစ်ပျက်), ခပ်သိမ်းသောကာလသင်၏မျက်နှာကိုပယ်သင့်လက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးရဲ့.
ဒါဟာသင်အားလပ်ရက်အပေါ်နေချိန်မှာကောင်းကောင်းစားရန်သွားနေသဘာဝကျပါတယ်, မှန်သော? နောက်ဆုံးတော့, စပိန်ချောကလက်နှင့် churros မပါဘဲကားအဘယ်သို့, နှင့်ပြင်သစ်တစ်ဦး baguette မပါဘဲကားအဘယ်သို့? ဒါကကျနော်တို့အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုမဟုတ်ပါဘူး, သို့သော်.
အရသာရှိတဲ့အစားအစာ ရှိသမျှကောင်းနှင့်ကောင်းလှ၏, သို့သော်သင်သေချာကောင်းစွာသကဲ့သို့သငျနေကျန်းမာတဲ့အစားအစာစေရန်လိုအပ်ပါတယ်. အချို့သောနေတစ်ကြိမ် greens ဘို့သူတို့အားနက်ရှိုင်း-ကြော်၎င်း၏ Goodies ထွက်အစားအစာပိရမစ်များနှင့် switch ကိုလိုက်နာပါ. သငျသညျကအခန်းတစ်ခန်းရှိပါက, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်သင်နှင့်အတူတစ်လျှောက်တွင်ဗီတာမင်ဆောင်ကြဉ်းတက်ကောငျးအလှနျ. ဗီတာမင် c ကိုရောက်စေဖို့သေချာပါစေ, probiotics, နှင့်အခြားလွယ်ကူသော-to-လောင်ဗီတာမင်.
အပြင်ခရီးသွားလာစဉ်ဤအရက်သောက်ခြင်းအရက်သောက်ဖို့အများဆုံးဆိုင်တဲ့ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာကောင်းစွာအလွန်အကျွံအရက်မသောက်တစ်လျှော့ချကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ဆီသို့ဦးတည်နိုင်သည်ဟုလူသိများရဲ့ (တချို့မတရားသောသူသည် Hangover). သင်နေမကောင်းရတဲ့ကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့ကြိုးစားနေနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျနိမ့်ဆုံးရန်သင့်အရက်သောက်စောင့်ရှောက်သေချာအောင်. နောက်ဆုံးတော့, အဘယ်သူသည်အအေးမိနှင့်အတူ Mona Lisa ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်လိုသည်?
နောက်ဆုံး Stay ကျန်းမာရေးသိကောင်းစရာ: သင့်ရဲ့ဧရိယာကိုရှင်းလင်း
ဒါဟာလုပ်ရတဲ့ဖြစ်နိုင်သည်, သင်မူကားသွားလာအခါတိုင်းရဲ့တန်ဖိုးရှိသငျနှငျ့အတူတလျှောက်တချို့ disinfecting Wipe ဆောင်ခဲ့. အဘယ်ကြောင့်? ကျနော်တို့ပြီးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့င့်သူအပေါငျးတို့ဗန်းစားပွဲနှင့်ထိုင်ခုံ clean up လုပ်ဖို့. Clorox Wipe ziplock အိတ်သို့အမြောက်အများနှင့်ထားအတွက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်. သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ပေါ်တွင်သင်၏အတူသယ်မည့်အိတ်ပေါ်တွင်သင်နဲ့အတူသူတို့ကိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်.
ဖို့အတွက်လက်မောင်းဒာသုတ်ဖို့သေချာပါစေ, seatback အိတ်ကပ် (သင်တဦးတည်းရှိပါက), နှင့်အကူအညီနဲ့ရန်သင့်ပိုးသတ်ဆေးနှင့်အတူပင်နဲ့ခါးပတ်ထိကပေါက်တတ်နိုင်သမျှစင်ကြယ်သောအဖြစ်ကြောင်းကိုသင်၏ဧရိယာကျန်ရှိနေသေချာ.
ပြည်သူ့ပိုပြီးမကြာခဏအခြားနီးပါးဘာမှထက်ခရီးသွားလာနေစဉ်နေမကောင်း get. အခြားလူတိုင်းအတွက်ကဲ့သို့ဖြစ်မနေပါနဲ့. ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်အသုံးပြုမှုဂရုစိုက်ပါ တစ်ဦးကရထား Save!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “7 နညျးလမျးမြားရန် Stay ကျန်းမာရေး Travel နေစဉ်” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fstay-healthy-while-traveling%2F%3Flang%3Dmy ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
အောက်ပါလင့်ခ်များတွင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, ဒီ link ကိုစာမျက်နှာများတွင်လေယာဉ်ဆင်းသက်အင်္ဂလိပ်လမ်းကြောင်းများအဘို့ဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, သင် / က de မှ / TR သို့မဟုတ် / es နှင့်သင့်ရွေးချယ်ပိုမိုဘာသာစကားများပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#safetravel europetravel ။ trainjourney ရထားခရီးသွား ခရီးသွား